Dibadbaxayaasha taageersan militariga Suudaan ayaa ku baaqaya in la kala diro dowladda - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Dibadbaxayaasha taageersan militariga Suudaan ayaa ku baaqaya in la kala diro dowladda
Dibadbaxayaasha taageersan militariga Suudaan ayaa ku baaqaya in la kala diro dowladda
Boqolaal ka mid ah dibad-baxayaasha taageersan millatariga Suudaan ayaa ka qayb-galay salaaddii Jimcihii la soo dhaafay oo maalintii toddobaad ay fadhiyeen bannaanka hore ee madaxtooyada Khartoum, iyagoo dalbanayay in la kala diro dowladda ku-meel-gaadhka ah.
Taageerayaasha u guuritaanka Suudaan ee dimuqraadiyadda ay hoggaamiyaan dadka rayidka ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka Khamiistii, iyadoo dibad-baxayaal iska soo horjeeday ay fadhiisteen, iyagoo dalbanaya in dib loogu soo celiyo xukunkii milateri.
Mid ka mid ah dibad-baxayaasha taageersan militariga, Ibrahim Abdul karim, ayaa sheegay in dowladda laga rabo inay ugu yaraan daboosho baahiyahooda aasaasiga ah.
“Waxaan joognaa madaxtooyada si aan farriin cad ugu dirno mas’uuliyiinta, dowladda iyo Golaha Ku-meelgaadhka ah: waan gaajaysannahay inay na maqlaan, ma haysanno dawo, carruurteenna uma diri karno jaamacad ama iskuul mana haysanno cunto iyo dhar aan iyaga siino.
Mohammed Kheir Abdulnabbi oo muujiyey sida uu uga xun yahay ayaa ku rajo weynaa in dowladda iyo dhammaan daneeyeyaasha ay si dhaqso leh ula yimaadaan xal lagu hagaajinayo dhibaatada hadda ka jirta dalka.
“Xaaladdu sidii hore way ka liidataa oo kala qaybsanaantani wax faa’iido ah uma laha dalka haba yaraatee, waxaan rajaynaynaa in dadka macquulka ah ee dawladda iyo golaha millateriga ay u fadhiistaan ​​wada-hadal si xal loogu helo sidii dalka looga saari lahaa dhibaatada horseedi doonta in ay burburto ”.
Kumanaan qof oo taageersan in Sudan ay u gudubto dimuqraadiyad ay shacabku hoggaamiyaan ayaa maalintii Khamiista isugu soo baxay waddooyinka, iyadoo dibad-baxayaal iska soo horjeeda ay fadhiisteen, kuwaa oo dalbanaya in dib loogu soo celiyo xukunkii milateri.
Labada dhinacba waxay ka codsadeen taageerayaashooda inay ka waantoobaan weerarada, laakiin ku dhawaad ​​40 qof ayaa ku dhaawacmay, iyadoo qaarkood ay ku adkaatay neefsashada ka dib markii ciidamada amniga ay isku dayeen inay kala jebiyaan mudaaharaadyada iyagoo adeegsanaya “xoog, rasaas, iyo sunta dadka ka ilmeysiisa”, Golaha Dhexe ee Dhakhaatiirta Suudaan ayuu yiri.
Labada dhinac waxay kala matalayaan kooxaha iska soo horjeeda ee Xoogagga Xorriyadda iyo Isbedelka, oo ah dalladda rayidka ah ee hormuudka ka ahaa bannaanbaxyo horseeday in ciidamadu afgambiyaan madaxweynihii muddada dheer ee Cumar Al-Bashiir sannadkii 2019-kii.
Kooxda guud waxay taageersan tahay in loo gudbo xukunka rayidka, halka taageerayaasha garabka goostay ay dalbanayaan in milaterigu la wareego.
Dibad-baxayaashu waxay ku biireen socodkii ay soo abaabuleen kooxda guud ee Suudaan oo dhan, oo ay ku jiraan Khartuum iyo magaaladeeda mataanaha la ah ee Omdurman, Port Sudan oo bariga ah, iyo Atbara oo xagga woqooyi ah.
Previous articleKoobka Adduunka ee 2022-ka: Qatar ayaa diyaarisay garoomada tartanka
Next articleWiil dhalinyaro ah oo reer Liberia ah oo soo celiyay $ 50,000 ayaa lagu magac aabay ‘safiirka daacadnimada’